Sida Loogu Adeegsado Falanqaynta Shumaca ee Ka Ganacsi | vfxAlert official blog
Falanqaynta shumaca Qeybta 1: fikradaha aasaasiga ah, dib u noqoshada iyo shumaca sii socoshada
Ganacsiga isdabajoogga badan (HFT) wuxuu helayaa qeyb ballaaran oo ka mid ah howlaha keydka. Waxay umuuqataa inaysan suuqa boos ugajirin nin iyo algorithms-ka caadiga ah. Tani maahan kiiska - xitaa istiraatiijiyadda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee ugu horumarsan ma ahan iyada oo aan hababka la tijaabin waqtiga, sida falanqaynta laambadda.
Nidaamkan waxaa soo saaray ganacsiga Jabbaan ee bariiska Munehisa Homma sanadkii 1755 mana isbedelin si weyn ilaa maanta. Wuxuu sidoo kale helay qaababka shumaca aasaasiga ah kaas oo lagu go'aaminayo dib u noqoshada ama sii socoshada dhaqdhaqaaqa qiimaha hadda jira.
Marka la eego falanqaynta farsamada, laambadaha laydhku waxay xaqiijinayaan laba mabda 'aasaasi:
Qiimaha (shumaca) waxaa ku jira dhammaan waxyaabaha saameeya; looma baahna falanqeyn dheeraad ah (mid ka mid ah mabaadi'da Dow aragti).
Taariikhdu way iscelcelisaa iyadoo la kaashanayo qaababka garaafka waxaa macquul ah in la saadaaliyo ficilada inta badan ciyaartooyda saamiyada (Eder's Chaos Theory, Elliott's wave wave).
Mugga maqaalka ma oggolaan doono inaan si faahfaahsan u sharaxno dhammaan qaababka shumaca; waxaan sifiican uheleynaa kaliya ugu fudud isla markaana isla markaa leh tirooyin adag. Isla markiiba waa loo isticmaali karaa xitaa ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee loogu talagalay newbie's.
Ujeedada ugu weyn ee falanqaynta laambadda ayaa ah in la furo boos iyo, ka sii muhimsan, ugu dhow sida ugu macquulsan dhammaadka isbeddelka hadda socda. Shumacyada rogista waxay u baahan yihiin fiiro gaar ah!
Ereyga "qaabka dib u noqoshada (shumaca)" ma ahan mid gebi ahaanba sax ah. Waxay u muuqataa in jihada isla markiiba isbedesho, laakiin habdhaqankan suuqa waa dhif iyo naadir. Dib-u-noqosho ayaa ugu horreyntii ah isbeddel ku yimaada niyadda dadka suuqa ku jira, tusaale ahaan, inay kacaan ka dib dhicitaan.
Hawshu waa tartiib-tartiib; garaafku wuxuu ku tusayaa inay tahay muddo isku-dhaf ah oo cidhiidhi ah. Way fiicantahay in la tixgeliyo shumacyada noocan oo kale ah kaliya calaamadaha ugu horreeya ee isbeddelka iyo furitaanka ganacsiyada ka soo horjeeda oo keliya marka isbeddellada cusubi ay helaan xaqiijin kama dambays ah.
«Hummer» iyo «sudhan
Shumacyada, waxay kuxirantahay wajiga hadda ee dhamaadka suuqa - kore ee kor u kaca ama saldhiga hoos udhaca. Ma jiro wax is burinaya, falanqaynta farsamada sidoo kale waxaa jira astaamo "muraayad" ah, sida "Triple top / bottom".
Hooska hoose waa inuu noqdaa laba jibbaar jirka, midka kore wuu gaaban yahay ama la'aantiis. Caddaan "Hummer" dheeraad ah ayaa muujinaya kor u kac, iyo madow "Hanged" siday u kala horreeyaan hoos u dhaca.
Marka sawirka "Hanged" u muuqdo, waxaan sugeynaa xaqiijinta calaamadaha binary, maadaama tani ay muujineyso in qiimaha uusan ku jabi karin inta ugu badan ee maxalliga ah, laakiin xoogga dibiyadu weli way sarreeyaan. Sidaa darteed, shumaca dusha sare ma noqon karo calaamadda ugu dambeysa ee dib-u-dhaca hoos u dhaca .
«Dulqaadka», «Daboolka Daruuraha» iyo «Qaabka Gooynta»
Qaabababkii hore waxay ahaayeen baararka qiimaha hal, laakiin calaamadaha badankood waa iskudhaf shumacyo sida "Engulfing":
Kordhinta xoog leh ee hadda jirta ama hoos u dhaca;
Jirka shumaca labaad wuu ka weyn yahay kan koowaad waana “mid is qarxinaya” (hoos la’aan la'aan);
Shumaca labaad waa midab rogan. Ka-reebitaan ayaa loogu talagalay jirka aad u yaryar ee ugu horreeya oo la mid ah «Doji».
Waxyaabo dheeri ah oo kordhiya suurtagalnimada isbeddel isbeddel ka dib markii la liqo:
Farqi weyn ayaa u dhexeeya meydadka shumaca koowaad iyo kan labaad - dhammaadka isbeddelka;
Kalsoonida shumaca dib u celinta waxay ku sii kordheysaa isbeddellada muddada-dheer ama aadka u dhaqsaha badan. Haddii isbeddelku socdo waqti dheer, ciyaartoy waaweyni waxay kordhiyaan boosaska iska soo horjeedka ah ee ay sugayaan oo qiimaha way rogaan. Xaaladda kicinta fiiqan, sida dhacdooyinka aasaasiga ah, hagaajinta degdegga ah ee faa'iidada ayaa bilaabmaysa iyo shumac dabacsan ayaa muuqda.
Inuu liqo dhowr meyd isla mar.
Daboolka "Cloud Cloud Cover" waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay nooc aan dhammaystirnayn oo Bearish liqaysa; laga bilaabo tan, kalsoonidiisa lama dhimin. Waxaan fiirineynaa meesha shumaca madow - inbadan oo "shidan" shumaca cad, ayaa calaamadda sii xoogeysaneysa.
Haddii qaabku ka muuqdo geesaha, ka dibna qaabka "Cloud Cover" ee saldhigyada. Xaaladda ka soo horjeedda ayaa quseysa: shumaca cad ee sarreeya marka loo eego madowgii ugu horreeyay, sida ugu dhakhsaha badan u noqoshada.
Haddii shumacyada labaad aysan ku jabin heerarka adag ee taageerada / iska caabinta, tani waa calaamad muujinaysa in suuqu uusan diyaar u ahayn dib u noqosho oo uu ku sii nagaado banaanka suuqa .
«Xarami» iyo «Xaraami iskutallaabta»
Shumaca wuxuu rogayaa "Dibi / Bearish liqaysa". Jirka shumaca labaad ayaa si buuxda u buuxa (oo ay ku jiraan hoosku) kan hore. Haddii liqidda loo qaadan karo "lever" isbeddel ku soo noqnoqoshada, halkan waa halkii "bareeg" waqtiga joojinta dhaqdhaqaaqa. Laakiin tani waa calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah, gaar ahaan xagga sare.
Jirka oo yar, shumaca ayaa sii xoogaysanaya waxaanan u maleyn karnaa in marka qiimaha furan / xirmo isku beegmaan, suuqa uu ku sugnaan doono hubin la'aan ugu badnaan - Qaabka "Xalami Cross". Falanqeyntu ma sheegeyso qiimaha shamaca jirka uu u arko inuu yahay "iskutallaab", ganacsaduhu waa inuu go'aansadaa waqtiga iyo hantida. Laguguma talinaayo inaad dhaafto 2 ama 3 dhibic oo aad eegto hooska - haddii ay isku dhow yihiin isku wanaagsan signal.
Ha seegin "Iskutallaabta Xarami"! Tirakoobku wuxuu muujinayaa in shumacyada dusha sare badanaa ay u horseedaan isbeddel isbeddel ah marka loo eego sababaha. Waxaa lagugula talinayaa inaad xirto macaamil iibsiga iyadoon loo eegin macaashka / luminta hadda jirta .
Mid ka mid ah tirooyinka dhifka ah ee falanqaynta aan loo isticmaalin jirka shumaca, iyo hooskiisa. Muuqaal ahaan, waxay umuuqataa dhowr shumacyo oo sare / uguyar oo qiyaastii isku heer ah. Haddii shumacyadu qaabeeyaan qaab isku mar ah, sida sawirka ka muuqata, "tweezers "yadu waxay noqon doonaan xaqiijin dheeri ah.
Marka dhowr hoosku isku heer yihiin, waxay muujineysaa dib-u-guuleysiyo aan guuleysan oo taageero / caabbinta adag, burburkaas oo aan loo baahnayn kuwa sameeya suuqyada ee ka soo horjeedda isbeddelka. Heerkan ka dambeeya waxaa jiri kara Jooji Khasaaraha amarada ay sugayaan, iyo awoodda dib u noqoshada weli kuma filna.
Shumacyada ku hay hal max / daqiiqad oo ganacsatadu waxay hagaajin karaan macaashka ka hor isbedelka ugu dambeeya ee isbeddelka ama isku dayaya inuu sii wado dhaqdhaqaaqa. Si loo fahmo cidda ka dambeysa "tweezers" marka lagu daro falanqaynta garaafka, waxaan eegeynaa xaaladda guud ahaan, gaar ahaan dhacdooyinka aasaasiga ah.
Dhammaan qaababka dib u noqoshada waa in lagu taageeraa koror ama hoos u dhac ku yimaada mugga suuqa. Waxay ku siin karaan calaamad ka hor inta shumaca soo noqoshada uusan u muuqan, wayna joojin kartaa xitaa qaab cad .
Shumaca Sii wadida
Jabaaniyiinta waxay dhahaan: "waxaa jira waqti aad wax ku iibsato, ku iibiso oo aad ku nasato". Qaababka sii wadida laambaddu waxay si sax ah u tilmaamayaan joogsiga dhaqdhaqaaqa sicirka, intaas ka dib isbeddelku wuu sii socon doonaa in ka badan habka kale. Garaafka, tan waxaa loo arkaa inay tahay farqiga u dhexeeya shumacyada ama "daaqadda".
Muddooyinka aysan jirin wax ganacsi ah oo muuqaal ah ayaa si wanaagsan looga yaqaan ganacsatada. Falanqaynta farsamada, waxaa loogu yeeraa "farqiga". Badanaa waxay u muuqdaan furitaanka kal-fadhiyada ganacsiga cusub.
Kahor intaan arrimuhu sii socon, waxaa had iyo jeer jiri doona xilli dib u gurasho oo qayb ahaan ama gebi ahaanba "xirta daaqadda". Haddii kala duwanaanshuhu ballaaran yahay, waad furi kartaa jagooyinka isbeddelka muddada-gaaban. Waxaad ku dari kartaa tilmaamayaasha farsamada oo waxaad ka furan kartaa xuduudaha "daaqada" oo u shaqeynaya taageero / iska caabin .
"Tasuki Gap" waa nooc ka firfircoon "daaqada" - shumaca labaad ayaa gebi ahaanba xiri kara oo dib u bilaabi kara isbedelka. Haddii shumacaha xiga ee 2-3 ay ku sii jiraan gudaha Tasuki, calaamadaha waa la joojiyay.
Shumacyo cadcad oo kala firdhaya »iyo« Trade max / min farqiga »
Qaababyadu waa dhif iyo naadir, gaar ahaan «shumaca cad ee kala baxa». Hadday kor u kacdo waxaa loo tixgelin karaa inay tahay nooc ka xoog badan «Tasuki farqiga», xagga hoos u dhaca ma ahan qaab cagajugleyn ah, iibsadayaashuna waxay xirayaan oo keliya boosaska PUT ee ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah.
Qiimaynta ugu badnaan / ugu yar ee shumaca macnaheedu ma aha xagjir maxalli ah, laakiin muddo isukeenid kooban oo ku saabsan isbeddel xooggan, oo ay ku xigto "daaqad". Isla mar ahaantaana, shumacyadu waxay sameyn karaan "Tweezers" oo farqiga dhinaca ka soo horjeeda ayaa xaqiijinaya sii socoshada isbeddelka ugu weyn.
«Saddex Qaab» iyo «Saddex Askari oo Cadaan ah»
Lambarka seddexaad wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa kaliya qaababka shumacyada Japan laakiin sidoo kale falanqaynta farsamada reer galbeedka: "Triple top", seddex weji oo suuqa ah (uruurinta, qeybinta iyo dhamaadka) iyo wixii la mid ah. Ku celcelintu waxay xaqiijineysaa kalsoonida naqshadaha seddex-laab oo aad u deggan, rubucuna wuxuu muuqdaa marka isbeddelku dhammaado oo aan helin faa'iido weyn.
In "Habka Geedka", ka dib laambad weyn oo ay weheliyaan isbeddellada, waa inay jiraan ugu yaraan saddex kuwa laga noqon karo oo aan ka gudbin jidhkeeda. Bixitaan yar ayaa loo oggol yahay, oo haddii laambadda xigta mar labaad u socoto jihada isbeddelka, waxaan u qaadan karnaa in qiimaha aan dib loo rogi karin.
Saddex shamac oo cadcad oo isku xigta (askari) ayaa ka muuqan kara labadaba xagga sare iyo xagga hooseba waxay u taagan yihiin calaamadda koritaanka qiimaha deggan. Haddii dusha sare ee shumaca labaad iyo saddexaad aad u kala fidsan yahay ilaa 5-7 kii ka horreeyay, dhawaan wuxuu noqon doonaa suuq si xad dhaaf ah loo iibsaday. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka joogtid suuqa illaa qaabka soo noqoshada u muuqdo !
Xaaladda ka soo horjeedda, marka 2-3 shumaca uu ka yar yahay kan koowaad ayaa ka hadli kara iska caabinta iibiyaasha (hormarka xannibaadda) waxaana laga yaabaa inuu u muuqdo "Harami".
Qaybta labaad, ka akhriso astaamaha ugu adag ee dib u noqoshada "Doji" iyo talooyinka loo adeegsado falanqaynta laambadda ee istaraatiijiyada ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah.